Fomba fanodinana vaovao tanjon'ny tungsten-titanium Sputtering
Tungsten Titanium TargetNamboarina ho an'ny fizotran'ny metallurgy vovoka. Ireo akora karbida vita amin'ny simenitra tungsten-titanium mahazatra dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fomba fitotoana mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny velarana., ny fanodinana ny tanjon'ny tungsten-titanium dia mila mampiditra ny fanodinana arcs boribory na endrika tsy ara-dalàna, ary ny fomba fikosehana dia sarotra ny manamboatra endrika amin'ny arcs na tapers..Noho izany, ny tanjon'ny tungsten-titanium dia azo ahodina amin'ny alàlan'ny fihodinana fotsiny, etsy andaniny, tungsten dia marefo amin'ny hafanan'ny efitrano, amin'ny endrika vovoka, ary henjana mafy; etsy ankilany, firaka titanium dia manana tanjaka avo sy henjana avo, ary rehefa vovoka ny titane, mora ny mandoro. Ny tanjon'ny tungsten titanium dia mampifangaro ireo toetra roa voalaza etsy ambony. Ireo antony etsy ambony dia mitarika amin'ny filan'ny herin'ny fitaovana lehibe rehefa manodina sy manodina ireo fitaovana kendrena tungsten-titanium, ary ny bobongolo sy ny fitaovana dia tokony hanana tanjaka sy hamafisana ambony.. Ity lahatsoratra ity dia manolotra fomba fanovana vaovao kendren'ny tungsten-titanium kendrena.
Ny fomba fanodinana an'ity fitaovana kendrena tungsten-titanium ity dia miavaka amin'ny maha-izy azy: manome fitaovana kendrena tungsten-titanium sy takelaka fanohanana; famafazana ny fitaovana kendrena tungsten-titanium sy ny lovia ho fanohanana mba hamorona fivoriana kendrena tungsten-titanium; mampiasa fitaovana voalohany Ataovy ny fihodinana voalohany ny tanjon'ny tungsten-titanium ao amin'ny fivorian'ny kendrena tungsten-titanium, ary ny zoro tafiditra amin'ny sisin'ny fanapahana fitaovana voalohany dia 80 °; aorian'ny fihodinana voalohany, ny tanjon'ny tungsten-titanium Ny lamina ao ambadiky ny fivoriambe dia voahodina; aorian'ny fikarakarana ny takelaka ambadiky ny fivorian'ny kendrena tungsten-titanium, fitaovana faharoa ampiasaina hanatanterahana fihodinana faharoa ny banga amin'ny tanjon'ny tungsten-titanium, ary ny fitaovana faharoa Ny zoro fanapahana dia 35 °?55° .Ataovy antoka fa tsara ny kalitaon'ny vokatra kinendry tungsten-titanium farany, ary miaraka amin'izay, ny fomba dia afaka mampihena ny fitafian'ny fitaovana ary mampitombo ny androm-piainan'ilay fitaovana.
Précédent: Plansee dia mandefa tanjona kendrena MoNa hanatsara ny fahombiazan'ny sela CIGS
Manaraka: 2021 Nanomboka ny China Titanium Valley International Titanium Industrial Expo